MSF Waxaa ay Cambaareynaysaa Weerarada lala beegsanayo Shaqaalaha gargaarka Waxaana ay ku baaqeysaa Sii deynta Shaqallaha kale ee la Afduubay, Hawsha Gargaarka Bani’aadan ee Somalia waxaa Soo foodsaartay Khatar - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
MSF Waxaa ay Cambaareynaysaa Weerarada lala beegsanayo Shaqaalaha gargaarka Waxaana ay ku baaqeysaa Sii deynta Shaqallaha kale ee la Afduubay, Hawsha Gargaarka Bani’aadan ee Somalia waxaa Soo foodsaartay Khatar
07.01.2012 | Qeybta Guud
Sabti 7th January 2012 -Waxaa isbuucii tagay lagu dilay magaalada Muqdisho labo shaqalle oo ka tirsanaa Dhakaatiirta aan Xuduuda Laheyn(MSF) oo kala ah Philippe Havet iyo Andrias Karel Keiluhuo, waxaana dilay nin hubeysnaa ayagoo xilligaas ka fulinayay mashaariic gargaar magaalada Muqdisho. Sadex bil ka hor,labo ka mid shaqaalaha gargaarka ee MSF,Montserrat Serra iyo Blanca Thiebaut,ayaa iyana afduub loogu geystay Xeryaha qaxootiga Dhadhaab ,waqooyiga Kenya, iyaga oo xilligaas ku guda jiray fulin gargaar deg deg ah oo loo fidinayay shacab Soomaaliyeed.
Weeraradan lagu bartilmaameedsanayo shaqaalaha gargaarka waa in loo cambaareeyaa sida ugu kulul ee macquulka ah.Waxaa ay khatar galinayaan mashaariic caafimaad oo naf badbaadin ah kuwaas oo ayaguba xilligan aad uga fog daboolidda baahida caafimaad ee ay qabaan shacabka Soomaaliyeed
MSF waxaa ay iminka baadi goob ugu jirtaa xal u helidda su’aasha adag ee ah sidii ayadoo wax ku ool leh ay usii wadi laheyd hawlaheeda Somalia si loo gargaaro dadkaaad ugu baahida qaba daryeel ayadoo dhanka kalena la xaqiijinayo nabadgalyada iyo badqabka dhamaan shaqaalaheena. Waxaan codsi u diraynaa dhamaan dadka, gaar ahaan maamulda ka taliya goobaha Somalia ka mid ah ee lagu hayo asxaabteena lasooafduubay,in ay wax walba oo karaankooda ah ay geystaan si loo fududeeyo sii deynta Blanca Thiebaut iyo Montserrat Serra ayagoo badqaba.
MSF waxaa ay si joogto ah uga hawlgaleysay Somalia tan iyo 1991 una gargaareysay dhamaan Soomaalida u baahan gargaar dhamaan dhinacyda uu ka dhaxeeyo gacan ka hadalka iyo ismaandhaafku. Lixdii bilood ee tagay, MSF waxaa ay 14 mashruuc ku daweysay 225,000 bukaan oo Somalia ku sugan, waxaa ay tallaal siisay 110,000 caruur ah iyo ayadoo daryeeshay 30,000 oo caruur ah oo la il darnaa nafaqo darro. Sidoo kale, MSF waxaa ay 9 mashruuc kaalmo ku gaarsiisaa qaxooti Soomaaliyeed oo jooga Kenya iyo Ethiopia taas oo ay maalin walba sii adkaaneyso isu dheelli tirka isku dayga ah daboolidda baahida caafimaad ee baaxada leh ee dadka iyo khatarta soo foodsaareysa shaqaalaha MSF. Natiijada waxaa ay noqoneysaa in shacabka Soomaaliyeed –oo aad ugu nuglaaday dhibaatada ka dib 20 sano oo colaad sokeeye iyo faragalin caalami ah iyo waliba hay’adihii qaranka oo burburay,in ay helaan kaalmo ka yar intii hore.
“Si loo sii wado shaqadeeda gargaarka caafimaad ee bani’aadanimo si wax ku ool ah,MSF waxaa ay ka dooneysaa dhamaan dhinacyada isku haya Somalia, Madaxada iyoshacabka guud ahaan Somalia in ay garab naga siiyaan howshan iyo in ay gacan ka geystaan xaqiijinta nabadgalyada iyo amniga shaqaalaha gargaar” Sidaas waxaa ku baaqay Madaxweynaha calamiga ee hay’adda MSF , Dr Unni Karunakara .
“Saaxiibadeen Philippe iyo Kace, arrinkaa amniga iyo nabadgalyada ah si aafo leh ayay u hirgali weysay. Blanca iyo Mone dhankoodana, waxaa ay mas’uuliyad ka saarantahay madaxda iyo shacabka Soomaaliya fududeynta sidii si nabad ah loo dhameyn lahaa afduubidooda”